नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): झलनाथ लाई राजिनामा गराएर आफु प्रधानमन्त्री हुन प्रचन्डको खेल जारी, बिचरा बाबुराम हेरेको हेरै हुन बेर छैन फेरी पनि !
झलनाथ लाई राजिनामा गराएर आफु प्रधानमन्त्री हुन प्रचन्डको खेल जारी, बिचरा बाबुराम हेरेको हेरै हुन बेर छैन फेरी पनि !
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साउन २८ गते प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिने निश्चित भएको बताएका छन् । दाहालले त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुने बताए। प्रमुख तीन दलबीच शुक्रबार शान्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा दाहालले साउन २८ मा प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिने बताएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले भने– प्रधानमन्त्रीले समय तोकेरै शान्ति प्रक्रिया अघि नबढे राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको छ । शान्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ,'। कांग्रेस नेताहरूले भने शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याईकन माओवादी नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न नसकिने बताएका थिए। 'पहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुस्, त्यसपछि छलफल गर्न सकिन्छ। तर, शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याई माओवादी नेतृत्वमा
सरकार गठन सम्भव छैन,' कांग्रेस नेताहरूको भनाइ थियो। कांग्रेस नेताहरूसँग भने दाहालले एक्लै कुराकानी गरेका थिए। दाहाल र कांग्रेस नेताबीच आ-आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने र त्यसैअनुसार दुई पार्टीबीच थप कुराकानी गर्ने समझदारी भएको छ। त्रिदलीय वार्तामा प्रधानमन्त्री खनालले लामो पृष्ठभूमिसहित राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएपछि कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले वार्ताका एजेन्डाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। 'हामी केका लागि बैठक बसिरहेका छौं? साउन २८ गतेको विषयमा वा भदौ १४ मा आइपर्ने सम्भावित संकटका विषयमा?' । बैठकमा अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियामा भए/गरिएका काम समीक्षा गरिएको थियो। त्यस्तै सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माले सचिवालयले अहिलेसम्म गरेका काम र तयारीका विषयमा नेताहरूलाई सामूहिक रूपमा जानकारी गराएका थिए। एमाले नेता भीम रावलका अनुसार 'राजनीतिक र प्राविधिक तहबाट गर्ने कामहरूलाई छुट्ट्याएर त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने' विषयमा छलफल भएको थियो। समय कम भएकाले पनि राजनीतिक तहबाट छिटोभन्दा छिटो सहमति गर्नुपर्नेमा नेताहरू सहमत भएको रावलले बताए। बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले पनि शीर्ष नेताबीचको बैठक शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहेको र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बढेको प्रतिक्रिया दिए। 'मुलुकको आवश्यकता नै सहमति भएकाले त्यसको विकल्प छैन,' खनालले भने। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि छलफलले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न धेरै मद्दत गरेको बताए। सेना समायोजनका विषयमा भएका विषयहरुको सामूहिक रूपमा 'ब्रिफिङ' लिने काम भएको बताउँदै, यसबाट अघि बढ्न सजिलो हुने उल्लेख गरे ।